ကိုရင်​​လေးကိုတိုက်​သွားတဲ့ကား ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာပေါ်လာပါပြီ !!!! – ရှအေလငျး
ကိုရင်​​လေးကိုတိုက်​သွားတဲ့ကား ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာပေါ်လာပါပြီ !!!!
ယာဉ်​ပိုင်​ရှင်​​ဒေါ်ယုယုလွင်​ကိုရင်​​လေးကိုတိုက်​သွားတဲ့သင့်​ ရဲ့ကါးမှတ်​တမ်းအကုန်​ရပါပြီ ..ခုကိုရင်​​လေး အ​ခြေ​နေအ​တော်​ဆိုးပါတယ်​ လူပီသရင်​​တော့ လူလို ကျင့်​ပါမိ​ကောင်းဖခင်​အမျိုး​တွေဆို ဒီလိုမလုပ်​ပါဘူး ဆိုပြီး.. ဦးပဇင်း တစ်ပါးက Facebook မှာ Live လွှင့်ပြီး ဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီ..
ကိုရင်လေး တိုက်ပြေးသွားသောYGN- 6N- 6748 ဆူဇူကီး ၊ အာတီဂါကား တွေ့လျင် ဖမ်းပေးကြပါ
(21-8-18)တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းက အရုဏ်ဆွမ်းသံဃာတန်းအား ဝင်တိုက်ခဲ့သော YGN- 6N- 6748 Suzuki, အာတီဂါ ကားကို တွေရှိသူများ 199 (သို့) နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား ပေးကြပါရန်
ဘာကြောင့်ခုလိုချက်ချင်းမဖမ်းနိုင်တာလဲဆိုရင် ပိုင်ရှင်အမည်နဲ့လက်ရှိပိုင်သူကွဲလွဲနေလို့ပါ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင် ကား register ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဘို့အမြန်ဆုံးလုပ်သင့်နေပါပြီ။
သို့/ယာဉျ​ပိုငျ​ရှငျ​​ဒျေါယုယုလှငျ​ကိုရငျ​​လေးကိုတိုကျ​သှားတဲ့သငျ့​ ရဲ့ကါးမှတျ​တမျးအကုနျ​ရပါပွီ ခုကိုရငျ​​လေး အ​ခွေ​နအေ​တျော​ဆိုးပါတယျ​ ..လူပီသရငျ​​တော့ လူလို ကငျြ့​ပါမိ​ကောငျးဖခငျ​အမြိုး​တှဆေို ဒီလိုမလုပျ​ပါဘူး ဆိုပွီး.. ဦးပဇငျး တဈပါးက Facebook မှာ Live လှငျ့ပွီး ဖျောထုတျလိုကျပါပွီ..
ကိုရငျလေး တိုကျပွေးသှားသောYGN- 6N- 6748 ဆူဇူကီး ၊ အာတီဂါကား တှလေ့ငျြ ဖမျးပေးကွပါ
(21-8-18)တနင်ျဂနှနေနေံ့နကျပိုငျးက အရုဏျဆှမျးသံဃာတနျးအား ဝငျတိုကျခဲ့သော YGN- 6N- 6748 Suzuki, အာတီဂါ ကားကို တှရှေိသူမြား 199 (သို့) နီးစပျရာ ရဲစခနျးသို့ ဆကျသှယျ အကွောငျးကွား ပေးကွပါရနျ
ဘာကွောငျ့ခုလိုခကျြခငျြးမဖမျးနိုငျတာလဲဆိုရငျ ပိုငျရှငျအမညျနဲ့လကျရှိပိုငျသူကှဲလှဲနလေို့ပါ။ ဒီလိုအဖွဈမြိုးတှမေဖွဈအောငျ ကား register ကို မှနျမှနျကနျကနျဖွဈဘို့အမွနျဆုံးလုပျသငျ့နပေါပွီ။
အသိဥာဏ်နိမ့်ကျတဲ့ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျနော်တို့နေတယ်
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် လူမုန်းများတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး”
“ထိုင်းနိုင်ငံက ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုမှာ ကူညီခဲ့ကြတဲ့ fast and furious9အဖွဲ့သားများ “
ဇာတ်ကားခေါ်ရိုက်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဝေဠုကျော် !!!!
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ပြီးတော့…. မြန်မာ့လက်ဝှေ့ …သူတို့...
အမျိုးသမီးများ လျှို့ ဝှက်ကင်မရာ ရန်မှကင်းဝေးရန် ကာကွယ်နည်းများ